SENTAfrica and LIVINGWAY IMFUNDO » Projects
Ukuthunga Project Machine:
Real Aid Project- Ukuthunga Machine kanye ekuhlanganiseni Amakhono 2019
Inombolo enhle abesifazane ehilelekile Village Banking Savings bazizwe bahlukunyezwa izikweletu omkhulu futhi wafuna ukuthola izindlela on kanjani ebugqilini enjalo awful.
Kwakusekuseni kakhulu, Mashi 2019 lapho iqembu labesifazane wasondela umqondisi LWE ukuze uthole enye Amakhono Ukusekela.
Ngolunye usuku Amakhono Ukutholwa Workshop Sahlela imali kusuka SENTAfrica.
Imali njengoba bethenga ukudla, amanzi, iziphuzo ezibandayo, zokubhala kanye yohambo. Izindleko wawuyizinkulungwane MK220, 000
Iningi amaqembu abesifazane aphakanyisiwe amakhono ekuhlanganiseni uma nemishini yokuthunga kwakumelwe enikeziwe. Umbiko wathunyelwa LWE umlingani, SENTAfrica. Labe Ngathandaza ngale futhi wabelane. Ebulilini ayenziwa ngesikhumba labo iNkosi wathinta.
Ngemva kwezinyanga ezintathu- June 2019; 6 imishini esetshenziswa lokuthunga kwalethwa LWE isayithi Starfish Malawi. Kwaphawulwa ukuthi isimo amabili imishini eziyisithupha kwakungekuhle kuqhathaniswa nezinye ezine.
mayelana 21 abesifazane wezindleko 42 ababeza ukuqeqeshwa ngoMashi 2019 kwavela kumephu indlela phambili- ukuxoxa kanjani futhi nini ukuqala ukufunda indlela ukuphatha imishini. Imilayezo sethemba encouragements zabelwane kwabesifazane ephawula ukuthi isibalo ngemishini yokuthunga yenziwe itholakale kwakungenele bonke abesifazane.
I ekuhlanganiseni Amakhono Project kuzodinga 21 nemishini yokuthunga. Abesifazane ababili uzokwazi ukwabelana umshini owodwa ngesikhathi ukuqeqeshwa sessions. Nokho, silindele asele 17 imishini yokuthunga (uma wathenga OKUSHA) kungadla £ 1600.
Okwamanje, nomqeqeshi onekhono kusukela Starfish Malawi zizokhokhelwa LWE ukuqala akunika ekuhlanganiseni ukuqeqeshwa ukuze 4 abesifazane manje. Khona-ke la mavesi amane bazokwazi adlule amakhono lonke iqembu ngisho ukunweba iphrojekthi abesifazane okwengeziwe.
imishini angeziwe kudingeka – Ungamsiza? Zonke imali enikelwe kule phrojekthi izoya ukuthenga imishini yokuthunga iqembu le zabesifazane. Uma ufuna ukukhomba umnikelo wakho usithumelele i-email ocacisa ukuthi umnikelo wakho ngoba 'zokuthenga’ noma 'lokuthumela'. Sifuna ukunikeza eminye imishini nesikhombisa. Ngemva imishini ufike esikhumulweni ukuqeqeshwa LIVINGWAY isikhungo zizonikezwa. Abanikeli izogcinwa usesikhathini ngentuthuko iphrojekthi ngokusebenzisa le webhusayithi.
Ukunikeza amanzi ahlanzekile 2017 Kwaphela – Ngiyabonga kubo bonke abanikele!
Nomthandazo Garden – lokhu ithoma ukwakheka
Ukubuka kusukela ophahleni entsha
Roof ku yokwamukela izihambi 2017 – Kwaphela – Ngiyabonga kubo bonke abanikele.
Ukwakha Hammer Mill – Kwaphela – Ngiyabonga kubo bonke abanikele.
Ukuletha ugesi kusayithi – 2019?
Lalikade kunethemba lokuthi le phrojekthi ngabe sekuphothuliwe 2018 kodwa izingxoxo lusaqhubeka. Sihlala kulindeleke le phrojekthi ukuhlinzeka inselele eside. Kube kuyodingeka ukuba ukuzimisela ukubambisana phakathi koMkhandlu wesifunda, umhlinzeki ugesi, ESCOM kanye thina ngezincwadi nokunye ukusetshenziswa yale phrojekthi ukufinyelela ekupheleni. Lapho ithuba livela sifuna ukuba abakulungele. Okwamanje, kwanele ukuthi sikucela ukuba bathandazele LIVINGWAY IMFUNDO. Ekubeni azethembe sizodinga abe onokwethenjelwa kwamandla. Izivakashi zethu ngesikhathi LIVINGWAY Guesthouse, abasebenzisi eziningi LIVINGWAY Ummbila Mill futhi amaqembu usebenzisa LIVINGWAY nesetinkomfa bonke bazuze kokuba ugesi amapayipi. Sicela nikhulekele ukuthi lokhu kungaba ngokushesha nokuthi bonke invo0lved ku Ukumiswa kwalo ingqalasizinda ebalulekile uyokwenza bese ulandela ngokusebenzisa ngokuhlakanipha isifiso united ekukhuleni komphakathi.
Lokhu kuzokwenza kube outlay enkulu LIVINGWAY IMFUNDO futhi ngeke kwasho ukuphela ingqalasizinda zezakhiwo zomsebenzi umsebenzi wethu. Kusukela leli phuzu, kuyothiwa kulindeleke ukuthi ukusakaza iholo lingase ngezimali umsebenzi ukuthuthukiswa LIVINGWAY IMFUNDO.
Siyoqhubeka zonke abasekeli bethu futhi wabathanda umsebenzi wethu unolwazi njengoba le phrojekthi uyaqhubeka.
Uma ufuna ukunikela maqondana ukuphothulwa kwalesi phrojekthi zisebenzisa inkinobho engezansi ukuze banikele bese usithumela i-imeyili eyalandela ukuze ukhombise ukuthi ungathanda isipho ukuya.
Bheka LIVINGWAY ikhasi IMFUNDO, Chofoza lapha.
Thola mayelana IMFUNDO LIVINGWAY futhi CPD othisha: Chofoza lapha
Thola mayelana LIVINGWAY IMFUNDO futhi RealAid; Chofoza lapha
Yiya ekhasini LIVINGWAY IMFUNDO ukuthola ukuthi umsebenzi wenzeke noma ukuya IZINDABA ZAMUVA bese ulanda yakamuva OKUSHA.
Ungakhohlwa Xhumana nathi bese usitshele ukuthi ucabangani.